सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर उत्सव एक्स्प्रेस योजनाको विजेता घोषित - Dainik Nepal
शुक्रबार, ५ असोज २०७५
सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर उत्सव एक्स्प्रेस योजनाको विजेता घोषित
दैनिक नेपाल २०७४ असोज ८ गते १९:३८
काठमाडौं, ८ असोज । सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर उत्सव एक्स्प्रेस योजनाको दोस्रो साता को बिजेताहरु घोषणा गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक लक्की ड्र मार्फत चाँदीका सिक्का तथा ओप्पो फोन विजेताको घोषणा गरेको हो । चाँदीको सिक्का विजेताका रुपमा प्रेम बहादुर आले मगर्, ललिता राई, लोक राज शर्मा, राम प्रीत केवत्, शोभा थापा मगर्, अनुजा भट्टराई, समझना ढकाल, सुनिता महर्जन छनोट भएका छन् । त्यसैगरी, ओप्पो फोन विजेताका रुपमा चिरा कुमारी शर्मा छनोट भएकी छिन् ।
लामो समयदेखि मनी ट्रान्सफर सम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराइरहेको सिटी एक्स्प्रेसले समस्त नेपालीको महान चाड दशैं तिहार र छठलार्र्ई लक्षित गर्दै आफ्नो उपहार योजना सञ्चालन गरेकोे छ । कम्पनीले यस पटक आफ्ना उपभोक्ताहरुका लागि ९० दिन सम्म चल्ने उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
सिटी एक्स्प्रेसका अनुसार उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ताहरुले दैनिक एक तोला चाँदीका सिक्काहरु, क्याप, टी सर्ट र किरिङ उपहार जित्न सक्छन् । त्यसैगरी साप्ताहिक रुपमा एक जना भाग्यशाली विजेताले ओप्पो मोबाइल र हरेक महिना एक जनालाई एलजी रेफ्रिजिरेटर उपहार प्रदान गरिने छ । उपहार योजनाको अन्त्यमा एक जना भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहारका रुपमा रेनौल्टकोे क्विड आरएक्सएल कार जित्न सक्नेछन् ।
कम्पनीका अनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक विजेताहरु समेत बम्पर उपहारका लागि छनोट हुने जानकारी दिएको छ । उपहार योजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कारोवार गर्ने दूबै वर्गका ग्राहक संलग्न हुन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । थप जानकारीको लागि सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्स्फर फेसबुक पेजमा बुझ्न सक्नु हुनेछ।
बिना धितोका ऋणीको मृत्यु भएमा मुक्तिनाथले तिरेको रकम फिर्ता दिने र बाँकी मिनाहा गर्ने
पैसा ठिक पार्दै गर्नुस्, जनसेवी लघुवित्तको आइपीओ निष्काशन हुँदै
जनता अवकाश कोष संचालक समितिले गर्‍यो यस्तो निर्णय
भारतीय बन्दुकधारी समूहद्वारा दिनदहाडै सुनसरीमा शिक्षकको हत्या, प्रहरीमाथि गोली प्रहार
प्रधानमन्त्रीसँग सेटिङ मिल्यो भन्ने नहकुल केसीका यी हुन् ‘काला कर्तुत’हरू
उपेन्द्र यादवकी ‘प्रिय उपाध्यक्ष’ : चुनावमा मनोमानी, सडकमा संविधान बिरोधी !
बामदेवलाई ‘कमेडी पात्र’ नबनाऔं
राजनीतिको कुन फेरो समात्न फेरि थाइल्यान्ड पुगे निर्मलनिवासका ससुरा–बुहारी ?
प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सुव्यवस्था दिन सक्दैन
सशस्त्र डिआइजी मन्दिप श्रेष्ठको आदेश नहुँदा हत्यारा सीमापार !
पूर्वएमालेका जिल्ला सदस्य थिए खुर्सिद आलम, गृहमन्त्रीलाई मुस्लिम नेताहरूको दबाब
गायिका साहिमाले ल्याइन् ‘ढिँकीच्याउँ’, गीतमा फरक प्रयोग
सहमति तोड्ने यी श्रीमानलाई आइलाग्यो आपत्
सरकारी पैसामा विद्यासुन्दर शाक्य पत्नीसहित अमेरिका घुम्दै
‘छोरीले पोल्यो भनिन्, कपडा खोलेर हेर्दा यौनीबाट रगत बगेको थियो’
गलत बाटोबाट परराष्ट्र सेवामा दरबन्दी थप्ने प्रयास
नेकपाका नेतालाई यसरी गोली हानेर हत्या गरियो
प्रधान सम्पादक/सञ्चालक : गणेश पाण्डे इमेलः [email protected]